1. Dict - ဒီ extension ကို install လုပ်ပြီး ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တဲ့စာလုံးကို highlight လုပ်၊ နောက် .. right click လုပ်ပြီး ကြည့်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ .. "blog" ဆိုတဲ့စာလုံးကို hightlight လုပ်ပြီး right click လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Define "blog" ဆိုပြီးပေါ်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။ အဖြေ (result) ကိုတော့ pop-up window တစ်ခုအနေနဲ့ ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Dictionary Search - အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ dict extension နဲ့အတူတူပါပဲ။ result ကိုတော့ new tab တစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးပြီး The Free Dctionary ကို အခြေခံထားပါတယ်။
3. FastDict - ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ extension ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ install လုပ်ပြီးချင်း သုံးလို့မရသေးပဲ သူ့ရဲ့ option ကိုသွားပြီး setting လုပ်ပေးရပါသေးတယ်။ setting လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ Tools > Add on ကိုသွားပြီး FastDict ရဲ့ Option မှာ ထည့်ပေးရမှာပါ။ setting ပေးရတာ သုံးမျိုးပဲရှိပါတယ်။ စာလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပယ်ကို သိချင်ရင် အဲဒီစာလုံးကို control+click (or) shift+click (or) alter+click နဲ့ကြည့်မှာလား ဒါမှမဟုတ် သုံးမျိုးလုံးကို အသုံးပြုပြီး ရွေးမှာလားဆိုပြီး setting သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Option ထဲမှာပါတဲ့ setting တွေပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ control+click လုပ်ရင် စာလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြဖို့ လုပ်ထားပြီး Dictionary ကိုတော့ Cambridge Dictionary ကို ရွေးထားပါတယ်။ Dictionary တွေအပြင် wiki, google search စတာတွေမှာလည်း ရှာဖွေဘို့အတွက် setting ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
Tags: dictionary extension, firefox extension, dict, dictionary search, fastdict
bluephoenix 3:08 am
wow very useful. thanks for ur post. by the way i am adding ur link at my blog www.bluephoenix4mm.blogspot.com. please allow me to do this.
tayzar 11:41 am
Really 10 Q ပါ ကိုcms ရေ ကျွန်တော်မှာ အဓီပါယ် မသိရင် အရင်က စာအုပ်အထူကြီးကို အင်တာနက်ဆိုင် ယူယူသွားနေရတာ အဆင်ပြေသွားပီ
CMS 10:37 pm
bluephoenix > yap u can bro: i already linked u back :)
tayzar > ကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ညီလေး :)
Traveller 8:36 am
oww Very good thanks..
other way. Myanmar dictionary . www.all-channel.com/ac/dictiionary/dictionary.aspx